Home News Fariin Shacab oo ku Socoto Madaxweyne Farmaajo”Wadooyinka waad naga xirtay Waad na...
Fariin Shacab oo ku Socoto Madaxweyne Farmaajo”Wadooyinka waad naga xirtay Waad na sirtay”
Qilaafka udhexeeya madaxweyne farmajo iyo R/W kheyre oo dhinaca dagaalkoduna qarsonyahay iyo Gudoomiye jawaari oo cabashadiisu banaanka taalo wuxuu geystay/yeeshay saameyn badan oo dhan walba leh tii ugu dambeysay waxey kudhacday shacabka oo wadooyinkii lagaxirtay lugahoodana maalaya iyo ciidamadii qaranka oo nin walba shaatigiisa udhiibtay.
Eedaha kaimaanaya shacabka.!
Eeda ka imaaneysa baarlamaanka labada dhinacba mucaarad iyo muxaafid.!
Gulufka u eg kafaa’ideysiga ee ka imaanaya kooxaha kasoohorjeeda dowlada.!
Dhulboobka u eg kafaa’ideysiga ee ka imaanaya kenya.!
Intuba waxey dusha ufuuleysaa waa sadexda iskumaqan oo hilmaamay masuuliyadii qarannimo ee loo igmaday!
Soomaalidu waxey dhahdaa gacmo geeljire hoosbaa loodhaqaa.
Dowladu waa iney iskulaabataa arinteedana hoos udhameysataa madaxda isheysatana waa iney siwadajira oga jawaabaan su’aalahan horyaala ee dhankasta kaimaanaya.
Madaxdeenaay iskaashada oo iskatiirsha cadowgiina